Linux ကိုကယ်ဆယ်ဖို့! ဘေးအန္တရာယ်မှပြန်လာရန်အပန်းဖြေစခန်းအချို့ Linux မှ
Linux ကိုကယ်ဆယ်ဖို့! ဘေးအန္တရာယ်မှပြန်လာရန်အပန်းဖြေစခန်းအချို့
ကံကောင်းထောက်မစွာပင်၊ Linux ကိုသုံးသောငါတို့တို့တွင်ပြeshနာဖြေရှင်းနည်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ distros အတော်များများကဒီ tools တွေကိုအတူတကွစုစည်းထားတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုယူနိုင်ပြီး Live CD တွေဖြစ်ခြင်းရဲ့အားသာချက်ကသူတို့ကို install လုပ်စရာမလိုပဲ run နိုင်တယ်။ဒီနေရာမှာကယ်ဆယ်ရေးစနစ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်အလွန်ကောင်းတဲ့ Linux distros တွေအကြောင်းကိုသာဖော်ပြပေးပါမယ်။ ၀ င်းဒိုးသေသွားသောအခါ၊
2 Backup နဲ့ Recovery ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပါ
3 Ubuntu ကယ်ဆယ်ရေး Remix
4 သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူကယ်ဆယ်ရေး disk ကို
SystemRescueCd ဆိုသည်မှာသင်၏ system ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်နှင့်ပျက်ကွက်ပြီးနောက်ဒေတာများကိုပြန်လည်ရယူရန်အသုံးပြုသော cdrom မှ Gnu / linux စနစ်တစ်ခု bootable ဖြစ်သည်။ သင်၏ hard drive ပေါ်တွင်အခန်းကန့်များဖန်တီးခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့သောသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာတာဝန်များကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်ရန်လည်းကြိုးစားသည်။ ၎င်းတွင် System Utility (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၊ partimage, fstools, ... ) နှင့်အခြေခံကိရိယာများ (အယ်ဒီတာများ၊ ညသန်းခေါင်တပ်မှူး၊ ကွန်ယက်ကိရိယာများ) များစွာပါဝင်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ cdrom မှ boot လုပ်ရုံဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည်။ system kernel သည်အရေးကြီးဆုံး file system များ (ext2 / ext3, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, vfat, ntfs, iso9660) နှင့် network files (samba နှင့် nfs) ကိုထောက်ပံ့သည်။
GNU အပိုင်း သည်သင်၏ hard drive အခန်းကန့်များကို Linux တွင်တည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာဖြစ်သည်။
GParted ၎င်းသည် Linux အတွက် Partition Magic ၏ကိုယ်ပွားဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ ၎င်းသည် Linux အတွက် Ghost / Drive-image ပုံသဏ္clာန်ဖြစ်သည်
Filesystem tools များ (e2fsprogs, reiserfsprogs, reiser4progs, xfsprogs, jfsutils, ntfsprogs, dosfstools) - သင့်ရဲ့ hard drive ပေါ်တွင်ရှိပြီးသား partition ကို format လုပ်ခြင်း၊
Sfdisk သည်သင့်အား partition table ကို backup လုပ်ရန်နှင့်ပြန်ယူရန်ခွင့်ပြုသည်
မင်းကြည့်လို့ရတယ် tools စာမျက်နှာ အသေးစိတ်အတွက်
မျက်စိကန်းသူများအတွက် SystemRescueCd ကိုလည်းရနိုင်သည်။ အခုဆိုရင် linux speakup version 1.5 မျက်နှာပြင်ဖတ်နိုင်တဲ့အရာကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေတယ်။ ပြီးတော့ Speakingup keyboard reader ကို install လုပ်လိုက်ပြီ။ ဒီ function ကို Gregory Nowak ကစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။
ဗားရှင်းတွေထုတ်လုပ်နိုင်တယ် စိတ်ကြိုက် disc ကို. ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်အလိုအလျောက်စနစ်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းပြုလုပ်ရန်သင်၏ကိုယ်ပိုင် script များကိုထည့်နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်တယ် ဒီဗွီဒီတစ်ခုကူးယူ အဆိုပါ SystemRescueCd နှင့် 4.2 GB ကိုအတူစိတ်ကြိုက် သင့်ရဲ့ဒေတာအတွက် (ဥပမာအား backup လုပ်ထား) ။ အသေးစိတ်အတွက်လက်စွဲကိုဖတ်ပါ။
အရမ်းလွယ်တယ် SystemRescueCd ကို USB ချောင်းတွင်တပ်ဆင်ပါ။ စီဒီကနေ boot မလုပ်နိုင်ရင်ဒါကအရမ်းအသုံးဝင်တယ်။ ဖိုင်များစွာကို pendrive သို့ကူးယူပြီး syslinux ကို run ပါ။ installation လုပ်ငန်းစဉ်ကို Linux မှဖြစ်စေ၊ Windows မှဖြစ်စေပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၏ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါ လက်စွဲ အသေးစိတ်အတွက်
ပိုမိုသိရှိလိုပါက | SystemRescueCd
Backup နဲ့ Recovery ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပါ
Redo Backup and Recovery သည် hard disk နှင့်အခြားပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းမှုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုမိတ္တူကူးရန်အာရုံစိုက်ထားသော Linux ဖြန့်ချိခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Redo Backup and Recovery သည်အရွယ်သေးငယ်ပြီး 70MB ထက်နည်းသည်၊ ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မည်သည့်အရာကိုမဆို install လုပ်စရာမလိုဘဲ liveCD သို့မဟုတ် USB မှတ်ဉာဏ်မှသုံးနိုင်သည်၊ ရိုးရှင်းပြီးလက်တွေ့ကျသောအသုံးပြုသူပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ထူးခြားသည်။
Redo Backup and Recovery သည်သင့်အား Linux သို့မဟုတ် Windows အခန်းကန့်များကို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုရန်၊ ၎င်းတို့ကိုတည်းဖြတ်ရန်နှင့်အကြောင်းအရာများကိုထုတ်ယူရန်၊ အင်တာနက်သို့ဝင်ရောက်ရန်သို့မဟုတ်ချက်ချင်းစာတိုပို့ခြင်းဖြင့်အခြားအရာများမှခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သို့သော် Redo Backup နှင့် Recovery ၏အဓိကကိရိယာသည်၎င်း၏ backup လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ အဆင့်အနည်းငယ်တွင်သင့် disk ကိုအတိအကျမိတ္တူကူးယူပြီး Windows နှင့် Linux ဖြစ်ပါကသင့်ကွန်ပျူတာနှင့်အမှားအယွင်းရှိလျှင်ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။
၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောကိရိယာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ hard drives များ၏အခြေအနေကိုကြည့်ရှုရန်အစီအစဉ်များရှိသည်။PhotoRec၊ ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်များမှဖိုင်များကိုပြန်လည်ဆယ်တင်ရန် (သို့) backup ကိရိယာများ ကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်ခုဖိုင်တွဲများထပ်တူပြုပြီးနှင့်တစ် ဦး incremental မိတ္တူလုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤအရာအားလုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် console မှအမိန့်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် Firefox၊ text editor နှင့် terminal ကိုထည့်ရမည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားရွေးချယ်စရာရှိသည် hard drive (သို့) partition image ကိုလျင်မြန်စွာဖန်တီးပါကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်လည်ဆယ်တင်နိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည်မှာစနစ်ချို့ယွင်းမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ hard drive မှဖိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲတစ်ခုကိုပြန်လည်ရယူလိုလျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ hard drive များသို့ရောက်ရှိရန်နှင့်ထိုဖိုင်တွဲကိုပြင်ပ hard drive သို့ကူးယူရန်အတွက်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောဖိုင်ဘရောက်ဇာကိုအသုံးပြုရန်လုံလောက်ပေလိမ့်မည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက | Backup နဲ့ Recovery ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပါ
Ubuntu ကယ်ဆယ်ရေး Remix
ဒါကများစွာသောအခြားဖြစ်ပါတယ် Ubuntu မှထုတ်လုပ်သောဖြန့်ဝေမှုများဤအမှု၌လည်ပတ်မှုစနစ် (သို့) အခန်းကန့်တစ်ခုပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်သင့်လျော်သောကိရိယာများကိုပေးအပ်ရန်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ ကောင်းသည်မှာ Ubuntu အသုံးပြုသူများအားလုံးတွင်၎င်းပြသနာသည်ကြီးမားသောပြproblemsနာများမဟုတ်ပါ။ console မှကိုင်တွယ်သောကြောင့်သင်ယူခြင်းကိန်းကိုအနည်းငယ်တိုစေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း mode ကို Ubuntu တွင်ဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုနေလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၎င်းတို့ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသိပြီးဖြစ်သည်။ ။
ဒီဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့အရာဖြစ်ကြ၏ ကျွန်တော်တို့ကိုဒေတာပြန်လည်နာလန်ထူ၏လက်တွေ့ကျတဲ့ဥပမာပေးသောဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ယခင်ဖြစ်ရပ်နှစ်ခု၌ကဲ့သို့၎င်းတွင်ဖိုင်များနှင့်အခန်းကန့်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှိုက်ပုံးများမှပယ်ဖျက်ထားသောအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက်ကိရိယာများစွာပါဝင်သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက | Ubuntu ကယ်ဆယ်ရေး Remix
သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူကယ်ဆယ်ရေး disk ကို
Trinity Rescue Kit (TRK) သည် Windows ကွန်ပျူတာများကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်နှင့်ပြုပြင်ရန်အထူးဖန်တီးထားသောအခမဲ့ Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အရေးအကြီးဆုံးလက္ခဏာများသည်အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
တူညီသော command ဖြင့်အလုပ်လုပ်ပြီးအင်တာနက်မှတဆင့် update လုပ်သော antivirus ပရိုဂရမ် ၅ မျိုး - ClamAV (clam), F-prot (fprot), Grisoft AVG (avg), Bitdefender (bde), Vexira (va) ။
ကွန်ယက်မှ NTFS ဖိုင်စနစ်များကိုပုံတူကူးခြင်း။
ဆုံးရှုံးသွားသော partitions ကို၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေး။
မည်သည့်ဖိုင်စနစ်၏ Multicast Cloning Utility ကို။
2 RootKits ထောက်လှမ်း utilities ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက | သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူကယ်ဆယ်ရေး disk ကို
CDlinux (Compact Distro Linux) သည် CD မှလည်ပတ်။ မှတ်ဥာဏ်နည်းပါးသောကွန်ပျူတာများအတွက်သင့်တော်သော GNU / Linux mini-distribution ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် XFCE ကိုအသုံးပြုသည်။ အလင်းနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ မာလ်တီမီဒီယာဖိုင်များဖွင့်ရန်၊ စာရွက်စာတမ်းများကိုတည်းဖြတ်ရန်၊ အင်တာနက်သို့ဝင်ရောက်ရန်၊ ဓါတ်ပုံများတည်းဖြတ်ရန်ကိရိယာများကိုထည့်သွင်းထားသည်။
CDlinux သည်အလွန်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ ၎င်းကို CD, DoC, Flash, ATA, SATA သို့မဟုတ် SCSI hard disk, USB, IEEE1394 bus များမှ ext2, ext3, jfs, reiserfs, xfs, isofs နှင့် udf partitions များမှ hfs, hfsplus, fat သို့မဟုတ် ntfs ကိုဖတ်ပြီး install လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ။
CDlinux သည်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ကွန်ယက်ထုတ်ကုန်အမြောက်အမြားကိုထောက်ပံ့သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကွန်ပျူတာဟောင်းများအတွက်သို့မဟုတ်ကွန်ယက်များနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အစားထိုးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက | CDLinux
RIPLinux သည် bootable CD သို့မဟုတ် USB တစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားစနစ်များကိုပြန်လည်ရယူရန်၊ အရန်ကူးရန်၊ boot လုပ်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ RIPLinux သည် Windows အပါအ ၀ င် disk drives အမျိုးမျိုးနှင့် partition အမျိုးအစားများကိုထောက်ပံ့သည်။ ၎င်းသည်အားသာချက်များစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်ပျက်စီးနေသော system boot များကိုပြန်လည်ရယူရန်၊ မတူညီသောဖိုင်စနစ်များကိုထောက်ပံ့ရန်၊ အမျိုးမျိုးသော disk များနှင့်ကွန်ယက်များကိုထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်“ cons” ၂ ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်ဗဟုသုတမြင့်မားစွာလိုအပ်သည်။ Terminal မှတစ်ဆင့်အရာအားလုံးပြုလုပ်သည်။
Fetchmail, curl, wget, ssh / sshd, mutt, links, msmtp, tmsnc, slrn, lftp, epic နှင့် Firedox တို့အား SSL အထောက်အပံ့
၎င်းတွင် ctrwtool, mkudffs နှင့် pktsetup packages များပါ ၀ င်သည်။
fsck.reiserfs နှင့် 'fsck.reiser4' သည် reiserfs နှင့် reiser4 filesystem ကိုစစ်ဆေး။ ပြုပြင်ရန်ဖြစ်သည်။
xfs_repair Linux xfs ဖိုင်စနစ်ကိုပြုပြင်ရန်။
jfs_fsck သည် Linux jfs filesystem ကိုစစ်ဆေးပြုပြင်ရန်။
e2fsck သည် Linux ext2 သို့မဟုတ် ext3 ဖိုင်စနစ်ကိုစစ်ဆေး။ ပြုပြင်ရန်။
data ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲ Windows NTFS စနစ်ကိုအရွယ်အစားပြောင်းလဲရန် ntfsresize ။
ntfs-3g ကို Windows NTFS စနစ်များသို့ရေးရန်။
chntpw သည် ၀ င်းဒိုးစနစ်များရှိသုံးစွဲသူအချက်အလက်နှင့်စကားဝှက်များကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။
cmospwd သည် CMOS / BIOS မှစကားဝှက်ကိုပြန်လည်ရယူရန်ခွင့်ပြုသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက | RipLinux
မှတ်ချက်။ ။ အကောင်းဆုံးကယ်ဆယ်ရေး distros များ၏စာရင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်ရှုရန်၊ ဒီစာမျက်နှာ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Linux ကိုကယ်ဆယ်ဖို့! ဘေးအန္တရာယ်မှပြန်လာရန်အပန်းဖြေစခန်းအချို့
David salazar ဟုသူကပြောသည်
၎င်းတို့သည် F-secure သို့မဟုတ် SupergrubDisk စာရင်းထဲသို့လည်းထည့်နိုင်သည်
David Salazar အားပြန်ပြောပါ
@ lllz @ p @ ဟုသူကပြောသည်
ငါအတူတူပါပဲလုနီးပါးတူညီသောအမှုကိုပြုအများအပြားဆော့ဖ်ဝဲများအကြားနှိုင်းယှဉ်ချင်ကြဘူး, အစဉ်မပြတ်ငါအရှိဆုံးအများဆုံးအားကောင်းတဲ့ရရှိရန်နှင့်အသုံးပြုချင်, ငါဤအရာတစ်ခုခုကိုမသုံးခဲ့ကြပေမယ့်ငါ့အအရေးပေါ်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်ရှိသည်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ထင်ပါသလဲမည်သည့် XD
@ lllz @ p @ သို့ပြန်သွားရန်
Rip သို့မဟုတ် systemrescue အလွန်ကောင်းစွာသွားပါ
မင်္ဂလာပါမာရီယို! ဖြည့်ညှင်းအမြဲတမ်းအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ link တစ်ခုပါ ၀ င်သောမှတ်ချက်များသည်ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုကြည့်ရှု။ အဆင်ပြေစေရန်လိုအပ်သည်။ အမြဲတမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တာ ၀ န်ရှိ spammer တွေကဘယ်တော့မှပျောက်မသွားဘူး။ 🙁
ကျွန်ုပ်သည် Linux အသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ဘဝ (သို့) ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာများ (သို့) မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကိုကယ်တင်ရန်ဤ "rescue cd's" တစ်ခုမှတစ်ခုကိုမကြာခဏအသုံးပြုခဲ့ရပါသည်။ အဲဒါကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်စစ်တပ်ဓား xD နဲ့နေရာတိုင်းငါသယ်ဆောင်လာတယ်။
အလွန်ကောင်းမွန်သော post တစ်ခုဖြစ်သည်။ windows အသုံးပြုသူများနှင့် linux အသုံးပြုရန်ငြင်းဆန်သူများအတွက်ပင် windows ပြတ်တောက်သောအခါ၎င်းတို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားသည့် livecd တစ်ခုရှိသည်။
ကောင်းသော artilcle ... ကြီးစွာသောကယ်ဆယ်ရေး discs တွေကို ..
ငါ puppy linux ကိုကယ်ဆယ်ရေး distro တစ်ခုအနေနဲ့ကြာမြင့်စွာကတည်းကအသုံးပြုခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် backup နဲ့ရရှိနိုင်တဲ့ hard နဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့ဆော့ဖ်ဝဲတွေနဲ့အလွန်အမင်းလိုက်ဖက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ပြန်လည်ဆယ်တင်ချင်တယ် (သို့) image တခုခုလုပ်ရင်၊ clonezilla ကိုထည့်သွင်းထားတယ်။
အလွန်ကောင်းသည်။ ငါ System Rescue နှင့် Redo ကို download လုပ်ပြီးပြီ။
ခွေးကလေးသည်နောက်ထပ်အလွန်ကြီးကျယ်သောဖြူဖပ်ဖြူကောင်ဖြစ်သည်။ ငါကဒီပို့စ်ထဲမှာထည့်မထားဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကကယ်ဆယ်ရေးစက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ကိုအထူးဒီဇိုင်းမထားလို့ပဲ။ ငါထပ်ခါတလဲလဲငါကအကောင်းဆုံး distros တစ်ခုဖြစ်သည်ထင်ပါတယ်။
သတိပေးချက်တစ်ခု၊ အကယ်၍ သင့်တွင် Live CD နှင့်ကွန်ယက်များချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုရှိပါကမည်သည့်စနစ်ကိုမဆိုပြုပြင်ရန်များစွာရှိသည်။ မေးခွန်းတစ်ခုကိုသင်ဖြည့်ညှင်း activated ပြီလော သူကစမ်းကြည့်ဖို့လိုတယ်လို့မပြောခင် xD ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တယ်
ဟုတ်ကဲ့၊ ယခုအခြားပို့စ်တွင်ပါ ၀ င်သောအရာများအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်နားလည်လာသည်။ ရှင်းလင်းချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့စုစည်း။ ငါ့ခမည်းတော်သည် Knoppix ကို သုံး၍ အသုံးမပြုနိုင်သောအခန်းကန့်မှဒေတာများကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။
ငါ SystemRescueCd ကိုအသုံးပြုပြီးများသောအားဖြင့် (ကျွန်ုပ်လက်လှမ်းမမှီသည့်အခါ) တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး lubuntu cd ကိုသာ သုံး၍ ကျွန်ုပ်အတွက်လုံလောက်သည်။ ငါဘာသိတာလဲ ... မင်းမှာရှိတာနဲ့မင်းရနေတာလားဟုတ်တယ်မလား
ငါအချို့စာမျက်နှာ၏ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါက ubuntu ၏ငါ့အပုံရသည်
ကြည့်ပါ၊ ဒီမှာတော်တော်ပြည့်စုံတဲ့လမ်းညွှန်ပါ။ http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=Recuperar_GRUB
ငါဒီကနေဒီကျောက်မျက် ၂ လုံးထပ်ထည့်သည်။ http://www.supergrubdisk.org/
Rescatux နှင့် Super Grub2 Disk များ
ငါသာဤမှတ်ချက်ကိုဖတ်: ငါကအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်ချင်တယ်။ SupergrubDisk သည်ကောင်းသော်လည်းအလွန်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ဒါက grub ဟာ hda နှင့် sda မဟုတ်ဘူးဆိုရင် meringue ပန်းပွင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိခဲ့တဲ့ kernel ဗားရှင်းအဟောင်းတွေနဲ့မတူနိုင်ပါ။
အဲဒီလိုပဲ။ တကယ်တော့နှစ်ခုလုံးကို linux distro နဲ့လုပ်နိုင်တယ်။ 🙂
RIPLinux နဲ့အတူပျောက်သွားတဲ့ GRUB ကို linux စနစ်မှပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသလား။
ငါ ext4 အခန်းကန့်၏အရွယ်အစားကိုလည်းတိုးချဲ့နိုင်သလဲ
multicast မှတဆင့် windows recovery ကိုလုပ်နေတယ်၊ ​​ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ compus ၂၃ ပါတဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုမှာတာဝန်ရှိတယ်။ ငါ samba server နဲ့ image ကို load လုပ်ပြီးတခြား computer တွေဆီကိုဖြန့်ဝေလိုက်တာနဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာရှာဖွေခဲ့တယ်။ မင်း Indea ရှိတယ်၊ ဘယ်လိုသွားလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါ UDPCast အောင်မြင်စွာကြိုးစားခဲ့ကြပြီ
Redo Backup ဖြင့်ဖျက်ထားသောဖိုင်များသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများကိုသင်ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ "Recover Lost Data" အပိုင်းရှိအောက်ပါ link ကိုကြည့်ပါ။
Alfonso Ovidio López Morales ဟုသူကပြောသည်
ထူးကဲ၊ GNU Linux လွတ်လပ်စွာအသိပညာဗဟုသုတဝေမျှပေးသည်။
Alfonso Ovidio López Morales အားပြန်ပြောပါ
Gtk +3သည်ငါတို့ထဲတွင်ရှိသည်။